impilo Archives - US Right to Know
Ngokusho the Federal Employee Viewpoint Survey for 2020, which was conducted by the U.S. Office of Personnel Management, 75 percent of EPA workers in the National Program Chemicals Division who responded to the survey indicated that they did not think the agency’s senior leadership maintained “high standards of honesty and integrity.” Sixty-five percent of the workers responding from the Risk Assessment Division answered the same way.
In izincwadi dated Jan. 21, the EPA Office of General Counsel said the following:
Posted on February 15, 2021 by UCarey Gillam
(Kubuyekezwe uFebhuwari 17, kungeza ukugxekwa kokufunda)
A iphepha elisha lesayensi Ukuhlola imithelela yezempilo engaba khona ye-Roundup herbicides kutholakale ukuxhumana phakathi kokuchayeka kumakhemikhali okubulala ukhula i-glyphosate nokwanda kohlobo lwe-amino acid olwaziwa njengengozi yesifo senhliziyo.
Abaphenyi benza izinqumo zabo ngemuva kokudalula amagundane akhulelwe kanye namazinyane abo asanda kuzalwa ku-glyphosate ne-Roundup ngamanzi okuphuza. Bathe babheke ngqo imiphumela ye-glyphosate-based herbicides (GBH) kuma-metabolites we-urinary nokuxhumana ne-gut microbiome ezilwaneni.
Abaphenyi bathi bathole ukwanda okukhulu kwe-amino acid ebizwa nge-homocysteine ​​emidlwane yamaduna evezwe ku-glyphosate ne-Roundup.
"Ucwaningo lwethu lunikeza ubufakazi bokuqala bokuthi ukuvezwa kwe-GBH esetshenziswa kakhulu, kumthamo wokuvezwa komuntu owamukelekayo njengamanje, uyakwazi ukuguqula imetabolites yomchamo kubo bobabili abantu abadala bamagundane namazinyane," kusho abaphenyi.
Leli phepha elinesihloko esithi “Ukuvezwa komthamo ophansi wemithi yokubulala ukhula eglyphosate kuphazamisa i-metabolism yomchamo nokusebenzisana kwayo ne-gut microbiota,” kubhalwe ngabaphenyi abahlanu abasebenzisana ne-Icahn School of Medicine eNtabeni iSinayi eNew York kanti abane baphuma eRamazzini Institute eBologna, e-Italy. Ishicilelwe kumagazini iScientific Reports ngoFebhuwari 5.
Ababhali bavumile ukulinganiselwa okuningi esifundweni sabo, kufaka phakathi usayizi omncane wesampula, kepha bathi umsebenzi wabo ukhombisile ukuthi "ukutholakala komthamo ophansi wokukhulelwa kanye nobuncane be-glyphosate noma i-Roundup kushintshe kakhulu ama-biomarker amaningi womchamo, emadamini nasenzalweni."
Lolu cwaningo lungolokuqala ngoshintsho lwe-metabolomic ye-urinary olwenziwe ngama-herbicides asuselwa ku-glyphosate emithamo njengamanje ebhekwa njengephephile kubantu, kusho abacwaningi.
Leli phepha lilandela ukushicilelwa ngenyanga edlule ka isifundo emaphephandabeni Impilo Yemvelo ethola i-glyphosate kanye nomkhiqizo we-Roundup kungashintsha ukwakheka kwe-gut microbiome ngezindlela ezingaxhunyaniswa nemiphumela emibi yezempilo. Ososayensi abavela eRamazzini Institute nabo babambe iqhaza kulolo cwaningo.
URobin Mesnage, ongomunye wababhali bephepha elashicilelwa ngenyanga edlule ku-Environmental Health Perspectives, wakuphikisa ukuba semthethweni kwephepha elisha. Uthe ukuhlaziywa kwedatha kukhombisa umehluko otholakele phakathi kwezilwane ezivezwe ku-glyphosate nalezo ezingadalulwanga - izilwane ezilawulayo - nazo bezingatholakala ngokufanayo ngemininingwane ekhiqizwe ngokungahleliwe.
“Sekukonke, ukuhlaziywa kwedatha akusekeli isiphetho sokuthi i-glyphosate iphazamisa i-metabolism yomchamo kanye ne-gut microbiota yezilwane eziveziwe,” kusho uMesnage. "Lolu cwaningo luzoqhubeka nokudida kancane impikiswano ngobuthi be-glyphosate."
Izifundo ezimbalwa zakamuva ku-glyphosate naku-Roundup bathole ukukhathazeka okuningi.
IBayer ilahlekelwe yizilingo ezintathu kwezintathu ezilethwe abantu abasola umdlavuza wabo ngokuvezwa yimithi yokubulala ukhula kaMonsanto, kanti iBayer ngonyaka odlule ithe izokhokha cishe amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-11 ukukhokha izimangalo ezifanayo ezingaphezu kwezingu-100,000 XNUMX.
izibulala-zinambuzane Bayer, umdlavuza, isifo senhliziyo, izifo, imvelo, Impilo Yemvelo, EPA, Ukudla, glyphosate, zezempilo, Monsanto, i-non-Hodgin lymphoma, izibulala-zinambuzane, IRamazzini Institute, RoundUp, isayensi, Imibiko yeSayensi, World Health Organization
Posted on February 8, 2021 by UCarey Gillam
QAPHELA - NgoFebhuwari, cishe ngemuva kwenyanga ngemuva kokubika kwembule ubungozi bomkhuba wesitshalo se-AltEn wokusebenzisa imbewu ephethwe yi-pesticide, abalawuli bezwe laseNebraska wayala isitshalo ukuthi sivalwe.
Bona le ndaba kaJanuwari 10 eThe Guardian, okwaba ngeyokuqala ukudalula amazinga ayingozi emithi yokubulala izinambuzane engcolisa umphakathi omncane eNebraska nokungasebenzi okwenziwa ngabalawuli.
Ukukhathazeka kugxile ku-AltEn, isitshalo se-ethanol eMead, eNebraska, obekulokhu kunjalo umthombo wezikhalazo eziningi zomphakathi ngaphezulu kokusetshenziswa kwembewu eboshwe ngezibulala-zinambuzane ukuze isetshenziswe ekukhiqizeni kwayo i-biofuel kanye nemikhiqizo edoti evelayo, ekhonjisiwe ukuthi iqukethe amazinga ama-neonicotinoids ayingozi namanye ama-pesticides angaphezulu kwamazinga ngokuvamile abhekwa njengaphephile.
Ukukhathazeka eMead kuyisibonelo sakamuva sokwanda kokwesaba komhlaba jikelele ngemithelela yama-neonicotinoids.
Bona lapha eminye yemibhalo elawula impikiswano kanye ezinye izinto zokwakha isizinda:
Ukuhlaziywa kokusanhlamvu kwe-wetcake okusanhlamvu
Ukuhlaziywa kwamanzi angcolile
Ephreli 2018 isikhalazo sesakhamuzi
Impendulo yombuso ezikhalweni zika-Ephreli 2018
Kwangathi uMeyi 2018 uphendula ngezikhalazo
I-AltEn Stop sebenzisa futhi uthengise incwadi ngoJuni 2019
Incwadi yombuso yenqaba izimvume futhi ixoxa ngezinkinga
May 2018 uhlu lwabalimi lapho basabalalisa khona imfucuza
Julayi 2018 ingxoxo ngembewu emanzi ephathwa
Sep 2020 incwadi iphinde ichitheke ngezithombe
Incwadi ka-Okthoba 2020 yokungathobeli
Izithombe zasemoyeni zesayithi ezithathwe ngumbuso
I-Neonicotinoids Ingazibulala Kanjani Izinyosi
Amathrendi ezinsalela ze-neonicotinoid pesticide ekudleni nasemanzini e-United States, 1999-2015
Incwadi evela kochwepheshe bezempilo eya kwi-EPA isexwayiso ngama-neonicotinoids
Incwadi evela ku-Endocrine Society eya ku-EPA kuma-neonicotinoids
Ama-pesticides we-Neonicotinoid angahlala emakethe yase-US, kusho i-EPA
Isikhalazo eCalifornia sokulawula imbewu ephathwe nge-neonic
Izinyosi Ezinyamalalayo: Isayensi, Ezombusazwe kanye ne-Honeybee Health (Rutgers University Press, 2017)
izibulala-zinambuzane acetamiprid, I-AltEn, Bayer, clothianidin, ukolweni, Ama-DDGS, dinotefuran, okusanhlamvu okwomile, imvelo, i-ethanol, zezempilo, imidacloprid, i-apocalypse yezinambuzane, Nebraska uMnyango Wezemvelo Namandla, neonicitinoids, ama-neonics, isayensi, Syngenta, thiamethoxam, IYunivesithi yaseNebraska
Posted on January 10, 2021 by UCarey Gillam
NgoJanuwari 10, iThe Guardian lashicilela le ndaba mayelana nomphakathi omncane wasemaphandleni waseNebraska obelokhu unenkinga okungenani iminyaka emibili nokungcola okuhlanganiswe nembewu yommbila eboshwe nge-neonicotinoid. Umthombo uyisitshalo sendawo se-ethanol ebesizikhangisa njengesihlelekile “Ukwenza kabusha” indawo yezinkampani zembewu ezinjengeBayer, iSyngenta kanye nezinye ezazidinga indawo yokulahla okweqile kwalezi zitoko zembewu ephethwe yi-pesticide. Umphumela, abantu basemadolobheni bathi, indawo ehlanganiswe namazinga aphakeme ngokumangalisayo ezinsalela ze-neonicotinoid, abathi zibangele ukugula kubantu nasezilwaneni. Besaba ukuthi umhlaba wabo namanzi manje sekonakele ngendlela engalungiseki.
Iziphathimandla zezemvelo zombuso zirekhode amazinga ama-neonicotinoids ku- izingxenye ezimangazayo ezingama-427,000 ngezigidigidi (ppb) ekuhlolweni kwelinye lamagquma amakhulu emfucuza esizeni sesakhiwo se-ethanol. Lokho kuqhathanisa namabhentshimakhi wokulawula athi amazinga kufanele abe ngaphansi kuka-70 ppb ukuze athathwe njengaphephile.
Bona leli khasi ukuthola eminye imininingwane nemibhalo.
Inganekwane yomgwaqo eMead, eNebraska, iyisibonakaliso sakamuva nje sokuthi ukwenganyelwa kokulawulwa kwezwe neonicotinoids kudinga ukuqiniswa, ngokusho kwabameli bezemvelo nabaphenyi abavela emanyuvesi amaningi aseMelika.
Impikiswano ngesigaba semithi yokubulala izinambuzane eyaziwa ngokuthi ama-neonicotinoids, noma ama-neonics, ibilokhu ikhula eminyakeni yamuva nje futhi isiphenduke impikiswano yomhlaba wonke phakathi kwama-behemoth ezinkampani athengisa ama-neonics kanye namaqembu ezemvelo nawabathengi athi ama-insecticide anesibopho sezempilo ebanzi yemvelo kanye neyabantu ukulimaza.
Kusukela yethulwa ngawo-1990s, ama-neonicotinoids abe yisigaba esetshenziswa kakhulu emhlabeni semithi yokubulala izinambuzane, esithengiswa emazweni angama-120 okungenani ukusiza ukulawula izinambuzane ezilimazayo nokuvikela ukukhiqizwa kwezolimo. Izibulala-zinambuzane azifuthwa kuphela ezitshalweni kodwa futhi zimbozwe nembewu. Ama-Neonicotinoids asetshenziselwa ukukhiqiza izinhlobo eziningi zezitshalo, kufaka phakathi irayisi, ukotini, ummbila, amazambane nosoya. Kusukela ngo-2014, ama-neonicotinoids amelwe ngaphezu kwe- Amaphesenti angama-25 omuthi wokubulala zinambuzane womhlaba wonke emakethe, ngokusho kwabaphenyi.
Ngaphakathi kwekilasi, i-clothianidin ne-imidacloprid yizona ezisetshenziswa kakhulu e-United States, ngokusho kwephepha lowe-2019 elishicilelwe ephephabhukwini Health Environmental.
NgoJanuwari 2020, i-Environmental Protection Agency yakhipha i- izinqumo eziphakanyisiwe zesikhashana ze-acetamiprid, clothianidin, dinotefuran, imidacloprid, kanye thiamethoxam, izinambuzane ezithile ngaphakathi kwesigaba se-neonicotinoid. I-EPA ithe ibisebenza ukunciphisa inani elisetshenzisiwe ezitshalweni ezihambisana "nobungozi bezemvelo obungahle bube khona," ibeke umkhawulo lapho izibulala-zinambuzane zingasetshenziswa ekutshalweni kwezitshalo.
Umzimba okhulayo wobufakazi besayensi ukhombisa ukuthi ama-neonicotinoids ayimbangela ekusakazekeni i-colony collapse disorder yezinyosi, okuyizinambuzane ezibalulekile lapho kukhiqizwa ukudla. Babukwa futhi okungenani njengengxenye yokusolwa kwe- an “I-apocalypse yezinambuzane. Ama-insecticide nawo aboshelwe emaphutheni amakhulu ngezinyamazane ezinomsila omhlophe, kujulisa ukukhathazeka ngamandla amakhemikhali okulimaza izilwane ezinkulu ezincelisayo, kuhlanganise nabantu.
I-European Union ivimbele ukusetshenziswa kwangaphandle kwe-neonics clothianidin, imidacloprid ne-thiamethoxam ngo-2018, kanye ne IZizwe Ezihlangene zithi Ama-neonics ayingozi kangangoba kufanele abekelwe imigoqo “ebucayi”. Kepha e-United States, ama-neonics ahlala esetshenziswa kabanzi.
izibulala-zinambuzane I-AltEn, BASF, Bayer, okusanhlamvu okwomile, imvelo, i-ethanol, Ukudla, zezempilo, zinambuzane, Ukudla, Nebraska, I-Nebraska Yezemvelo Namandla, ama-neonicotinoids, ama-neonics, izibulala-zinambuzane, isayensi, Syngenta, izizwe Ezihlangene, amanzi
Posted on November 23, 2020 by UCarey Gillam
Amaphepha esayensi amasha asanda kushicilelwa akhombisa ubuningi bokutholakala kokhula olubulala ukhula i-glyphosate kanye nesidingo sokuqonda kangcono umthelela ovezwa umuthi wokubulala izinambuzane odumile ongahle ube nawo empilweni yomuntu, kubandakanya nempilo yegciwane le-microbiome.
In elinye lamaphepha amasha, Abaphenyi abavela eNyuvesi yaseTurku eFinland bathi bakwazile ukuthola, "ngokulinganisela okulindelekile," ukuthi cishe amaphesenti angama-54 ezinhlobo ezisengxenyeni ye-gut microbiome yomuntu "angazwela" ku-glyphosate. Abaphenyi bathi basebenzise indlela entsha ye-bioinformatics ukwenza okutholakele.
Nge "ingxenye enkulu" yamagciwane asesiswini i-microbiome esengozini ye-glyphosate, ukutholwa kwe-glyphosate "kungathinta kakhulu ukwakheka kwe-gut microbiome yomuntu," kusho ababhali ephepheni labo, elishicilelwe kule nyanga Ijenali Yezinto Eziyingozi.
Amagciwane asemathunjini omuntu afaka izinhlobo ezahlukahlukene zamagciwane kanye nesikhunta futhi kukholelwa ukuthi kunomthelela ekusebenzeni komzimba kanye nezinye izinqubo ezibalulekile. Ama-microbiomes emathunjini angenampilo akholelwa ososayensi abathile ukuthi banikela ezinhlotsheni zezifo.
"Yize imininingwane yezinsalela ze-glyphosate ezinhlelweni zomgudu womuntu isashoda, imiphumela yethu iphakamisa ukuthi izinsalela ze-glyphosate zinciphisa ukwehluka kwamagciwane futhi zilinganise ukwakheka kwezinhlobo zamagciwane emathunjini," kusho ababhali. "Singacabanga ukuthi ukutholakala isikhathi eside ezinsaleleni ze-glyphosate kuholela ekubuseni kwamagciwane amelana nomphakathi wamagciwane."
Ukukhathazeka ngomthelela we-glyphosate kumgudu womuntu we-microbiome kusuka eqinisweni lokuthi i-glyphosate isebenza ngokukhomba i-enzyme eyaziwa njenge-5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS.) Le enzyme ibalulekile ekwakhiweni kwama-amino acid abalulekile.
“Ukuthola umthelela wangempela we-glyphosate ku-gut gut microbiota nakwezinye izinto eziphilayo, kudingeka izifundo ezengeziwe zokuveza izinsalela ze-glyphosate ekudleni, ukuthola imiphumela ye-glyphosate emsulwa nokwakhiwa kwezentengiselwano kuma-microbiomes nokuhlola ukuthi i-EPSPS yethu ingakanani izimpawu ze-amino acid zibikezela ukuthi amagciwane angabanjwa yi-glyphosate in vitro kanye nezimo zomhlaba wangempela, ”kuphetha ababhali bephepha elisha.
Ngaphezu kwabaphenyi abayisithupha abavela eFinland, omunye wababhali bephepha ubambisene nomnyango we-biochemistry kanye ne-biotechnology eRovira i Virgili University, eTarragona, eCatalonia, eSpain.
“Imiphumela yezempilo yomuntu ayinqunywa esifundweni sethu. Kodwa-ke, ngokuya ngocwaningo lwangaphambilini… siyazi ukuthi ushintsho ku-gut gut microbiome lungaxhunyaniswa nezifo eziningi, ”kusho umcwaningi wase-University of Turku uPere Puigbo enkulumweni abe nayo.
"Ngiyethemba ukuthi ucwaningo lwethu luvula umnyango wokuqhubeka nokuhlola, ku-in-vitro nasensimini, kanye nezifundo ezenzelwe inani labantu ukuze kukalwe umphumela ukusetshenziswa kwe-glyphosate okunayo kubantu nakwezinye izinto eziphilayo," kusho uPuigbo.
I-Glyphosate isithako esisebenzayo kuma-Roundup herbicides kanye namakhulu eminye imikhiqizo yokubulala ukhula edayiswa emhlabeni jikelele. Yethulwa njengombulali wokhula nguMonsanto ngonyaka we-1974 futhi yakhula yaba umuthi wokubulala ukhula osetshenziswa kakhulu ngemuva kokwethulwa kukaMonsanto ngeminyaka yama-1990s yezitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo ukubekezelela ikhemikhali. Izinsalela ze-glyphosate zivame ukutholakala ekudleni nasemanzini. Ngenxa yalokho, izinsalela zivame ukutholakala emchameni wabantu abavezwe ku-glyphosate ngokudla kanye / noma ngokufaka isicelo.
Abalawuli baseMelika kanye nomnikazi weMonsanto uBayer AG bagcina ukuthi akukho ukukhathazeka kwezempilo yabantu ngokuvezwa kwe-glyphosate lapho imikhiqizo isetshenziswa njengoba kuhlosiwe, kufaka phakathi okusele ekudleni.
Umzimba wocwaningo ophikisana nalezo zimangalo uyakhula, noma kunjalo. Ucwaningo ngemithelela engaba khona ye-glyphosate ku-gut microbiome alucishe luqine njengezincwadi ezihlanganisa i-glyphosate nomdlavuza, kepha luyindawo ososayensi abaningi bayaphenya.
Ngokuhlobene kancane iphepha eshicilelwe kule nyanga, iqembu labaphenyi baseWashington State University naseDuke University bathi bathole ukuxhumana phakathi kwamazinga amabhaktheriya nesikhunta emapheshana emathunjini ezingane namakhemikhali atholakala emakhaya abo. Abaphenyi abazange babheke i-glyphosate ngokuqondile, kodwa babenjalo wethukile ukuthola ukuthi izingane ezinamazinga aphezulu amakhemikhali avamile asendlini egazini lazo zibonise ukwehla kwenani nokwehluka kwamagciwane abalulekile emathunjini awo.
An iphepha elengeziwe lesayensi kushicilelwe kule nyanga kugcizelele isidingo sedatha engcono nengaphezulu uma kukhulunywa ngokuvezwa kwe-glyphosate nezingane.
Leli phepha, lishicilelwe ephephabhukwini Health Environmental ngabaphenyi abavela ku-Institute for Translational Epidemiology e-Icahn School of Medicine eNtabeni iSinayi eNew York, kungumphumela wokubuyekezwa kwezincwadi zezifundo eziningi ezibika amanani wangempela we-glyphosate kubantu.
Ababhali bathi bahlaziye izifundo ezinhlanu ezishicilelwe eminyakeni emibili edlule zibika amazinga e-glyphosate alinganiswa kubantu, kufaka phakathi ucwaningo olulodwa lapho kukalwa khona amazinga e-urinary glyphosate ezinganeni ezihlala emaphandleni aseMexico. Ezinganeni ezingama-192 ezihlala endaweni yase-Agua Caliente, amaphesenti angama-72.91 ayenezinga le-glyphosate elitholakalayo emchameni wazo, futhi zonke izingane ezingama-89 ezihlala e-Ahuacapán, eMexico, zazinamazinga atholakalayo we-pesticide emchameni wazo.
Noma ufaka izifundo ezingeziwe, kukonke, kunemininingwane embalwa mayelana namazinga e-glyphosate kubantu. Izifundo emhlabeni jikelele zingabantu abangu-4,299 kuphela, kubandakanya nezingane ezingama-520, kusho abacwaningi.
Ababhali baphethe ngokuthi okwamanje akunakwenzeka ukuqonda "ubudlelwano obungahle bube khona" phakathi kokuvezwa kwe-glyphosate nezifo, ikakhulukazi ezinganeni, ngoba ukuqoqwa kwedatha emazingeni okuvezwa kwabantu kunqunyelwe futhi akujwayelekile.
Baphawule ukuthi yize bekushoda imininingwane eqinile mayelana nemithelela ye-glyphosate ezinganeni, inani lezinsalela ze-glyphosate ezivunyelwe ngokusemthethweni ngabalawuli be-US ekudleni lenyuke kakhulu kule minyaka edlule.
"Kunezikhala ezincwadini ezibhalwe nge-glyphosate, futhi lezi zikhala kufanele zigcwaliswe ngokuphuthuma okuthile, uma kubhekwa ukusetshenziswa okukhulu kwalo mkhiqizo nokuba khona kwawo yonke indawo," kusho umbhali u-Emanuela Taioli.
Izingane zisengcupheni yokuthola izidalwa ezibulala imvelo futhi ukulandelela ukutholakala kwemikhiqizo efana ne-glyphosate ezinganeni “kuyinto ebaluleke kakhulu kwezempilo yomphakathi,” ngokusho kwabalobi bephepha.
"Njenganoma iyiphi ikhemikhali, kunezinyathelo eziningi ezibandakanyekile ekuhloleni ubungozi, okubandakanya ukuqoqa imininingwane mayelana nokuvezwa kwabantu, ukuze amazinga aletha ukulimala kubantu noma ezilwaneni ezilwaneni angaqhathaniswa namazinga okuvezwa ajwayelekile," kubhala ababhali.
“Kodwa-ke phambilini sikhombisile ukuthi imininingwane ngokuvezwa kwabantu kubasebenzi nakubantu jikelele incane kakhulu. Kunezinye izikhala zolwazi ezikhona kulo mkhiqizo, ngokwesibonelo imiphumela ku-genotoxicity yayo kubantu inqunyelwe. Impikiswano eqhubekayo mayelana nemiphumela yokuchayeka kwe-glyphosate yenza ukuthi amazinga okuchayeka emphakathini jikelele kube yinkinga ecindezelayo yezempilo yomphakathi, ikakhulukazi kulabo abasengozini enkulu.
Ababhali bathe ukuqapha amazinga we-urinary glyphosate kufanele kwenziwe kubantu abaningi.
“Siyaqhubeka nokuphakamisa ukuthi ukufakwa kwe-glyphosate njengokuvezwa okulinganisiwe ezifundweni ezimele izwe lonke njengeNational Health and Nutrition Examination Survey kuzovumela ukuqonda kangcono izingozi ezingase zibangelwe yi-glyphosate futhi kuvumele ukuqashwa okungcono kwalabo okungenzeka badalulwe futhi labo abasengozini yokuchayeka kalula, ”babhala.
izibulala-zinambuzane ukumelana namagciwane, amabhaktheriya, Bayer, umdlavuza, Amakhemikhali, izingane, izifo, Duke, EPA, Finland, glyphosate, zezempilo, ukhula, izivikeli mzimba, izingane, i-microbiome, Monsanto, INtaba iSinayi, izibulala-zinambuzane, IRanger Pro Roundup, RoundUp, I-Rovira i-Virgili University, isayensi, umbulali wokhula
Posted on November 13, 2020 by UCarey Gillam
Ucwaningo olusha lungeza ubufakazi obukhathazayo ekukhathazekeni kokuthi ukubulala ukhula okusetshenziswa kabanzi ikhemikhali glyphosate angaba namandla okuphazamisa ama-hormone abantu.
Ephepheni elishicilelwe ephephabhukwini I-Chemosphere okubizwa ngokuthi IGlyphosate nezimpawu ezibalulekile zokuphazamiseka kwe-endocrine: Ukubuyekezwa, abathathu bososayensi baphetha ngokuthi i-glyphosate ibonakala inezici ezisemqoka eziyisishiyagalombili kwezilishumi ezihambisana i-endocrine ephazamisa amakhemikhali . Ababhali baxwayisile, nokho, ukuthi izifundo ezizayo zamaqoqo zisadingeka ukuqonda kahle imithelela ye-glyphosate ohlelweni lomuntu lwe-endocrine.
Ababhali, uJuan Munoz, Tammy Bleak noGloria Calaf, ngamunye ohlangene neYunivesithi yaseTarapacá eChile, uthe iphepha labo libuyekeza okokuqala ukuhlanganisa ubufakazi bemishini ku-glyphosate njenge-endocrine-disruptting chemical (EDC).
Obunye bobufakazi bukhombisa ukuthi i-Roundup, i-herbicide eyaziwayo esekwe eMonsanto, ingaguqula i-biosynthesis yamahomoni ezocansi, ngokusho kwabaphenyi.
Ama-EDC angalingisa noma aphazamise amahomoni omzimba futhi axhumene nezinkinga zokukhula nezokuzala kanye nokungasebenzi kahle kobuchopho namasosha omzimba.
Leli phepha elisha lilandela ukushicilelwa ekuqaleni konyaka ukuhlanganiswa kwezifundo zezilwane okukhombise ukuvezwa kwe-glyphosate kunomthelela ezithweni zokuzala futhi kusongela ukuzala.
IGlyphosate yi-herbicide esetshenziswa kakhulu emhlabeni, edayiswa emazweni ayi-140. Yangeniswa ngokuthengisa ngonyaka we-1974 ngabakwaMonsanto Co, ikhemikhali liyisithako esisebenzayo emikhiqizweni ethandwayo efana neRoundup kanye namakhulu abanye ababulali bokhula abasetshenziswa ngabathengi, omasipala, izinsiza, abalimi, abasebenzisa igalofu, nabanye emhlabeni jikelele.
UDana Barr, uprofesa wase-Emory University eRollins School of Public Health, uthe ubufakazi “buvame ukuveza ngokusobala ukuthi i-glyphosate ine-endocrine ephazamisa izakhiwo.”
“Akuyona into engalindelekile ngoba i-glyphosate inokufana okuthile kwesakhiwo namanye ama-endocrine aphazamisa ukubulala izinambuzane; kodwa-ke, ikhathaza kakhulu ngoba ukusetshenziswa kwe-glyphosate kudlula kude eminye imithi yokubulala izinambuzane, ”kusho uBarr, oqondisa uhlelo esikhungweni sokucwaninga ngokuvezwa kwabantu esixhaswe yiNational Institutes of Health esikhishwe e-Emory. "IGlyphosate isetshenziswa ezitshalweni eziningi kakhulu nasezicelweni eziningi zokuhlala ezinjengokuchayeka kokuqoqeka nokuqoqekayo kungabonakala."
Phil Landrigan, umqondisi weGlobal Observatory on Pollution and Health, kanye noprofesa wesayensi yezinto eziphilayo
eBoston College, uthe ukubuyekeza kudonse ndawonye "ubufakazi obuqinile" bokuthi i-glyphosate iyisiphazamisi se-endocrine.
“Umbiko uhambisana nenqwaba yezincwadi ezibonisa ukuthi i-glyphosate inemiphumela engemihle yezempilo - okutholakele okuguqula isikhathi eside sokusebenza kukaMonsanto ukuvezwa kwe-glyphosate njengekhemikhali enobungozi engenayo imithelela emibi empilweni yabantu, ”kusho uLandrigan.
Ama-EDC bekuyinto ekhathazayo kusukela ngama-1990s ngemuva kochungechunge lwezincwadi eziphakamise ukuthi amanye amakhemikhali asetshenziswa kakhulu kuma-pesticides, izinyibilikisi zezimboni, amapulasitiki, okokuhlanza, nezinye izinto angaba namandla okuphazamisa ukuxhumana phakathi kwamahomoni nama-receptors awo.
Ososayensi ngokuvamile babona izakhiwo eziyishumi ezisebenzayo zama-ejenti aguqula isenzo se-hormone, ebhekisa kulezi njengezici eziyishumi "eziyinhloko" zabaphazamisi be-endocrine. Izici eziyishumi zimi kanje:
Ukusatshalaliswa kwama-hormone okuguqula amazinga wokujikeleza kwamahomoni
Yenza ushintsho ku-hormone metabolism noma imvume
Guqula isiphetho samaseli akhiqiza ama-hormone noma aphendula nge-hormone
Hlanganisa ama-hormone receptors
Hlanganyela noma usebenze ama-hormone receptors
Ukudluliswa kwesiginali eguquguqukayo kumaseli aphendula ama-hormone
Yenza ukuguqulwa kwe-epigenetic kumaseli akhiqiza ama-hormone noma aphendula ama-hormone
Ukuhambisa ama-hormone okuhamba ngaphesheya kwezingqamuzana zeseli
Ababhali bephepha elisha bathe ukubuyekezwa kwemininingwane yemishini kukhombisile ukuthi i-glyphosate ihlangabezane nazo zonke izici ezibalulekile ngaphandle kwezimbili: "Mayelana ne-glyphosate, abukho ubufakazi obuhambisana namandla aphikisayo ama-hormonal receptors," kusho bona. Futhi, "abukho ubufakazi bokuthi kunomthelela ekuguqulweni kwamahomoni noma ekususweni," ngokusho kwabalobi.
Ucwaningo olwenziwe emashumini ambalwa edlule lubhekise kakhulu kwizixhumanisi ezitholakala phakathi kwe-glyphosate nomdlavuza, ikakhulukazi i-non-Hodgkin lymphoma (NHL.) Ngo-2015, i-World Health Organization's International Agency for Research on Cancer i-glyphosate ehlukanisiwe njenge-carcinogen yabantu.
Bangaphezu kuka-100,000 abantu bamangalele uMonsanto e-United States okusolwa ukutholakala kwemithi yokubulala ukhula egxilwe enkampanini ye-glyphosate kubangele bona noma abathandekayo babo ukuba bathuthukise i-NHL.
Abamangali ecaleni lamacala ezweni lonke bathi iMonsanto sekuyisikhathi eside ifuna ukufihla izingozi zemithi yayo yokubulala ukhula. IMonsanto ilahlekelwe izivivinyo ezintathu kwezintathu kanti umnikazi wayo waseGerman uBayer AG usebenzise unyaka nohhafu odlule uzama ukuhlala amacala aphume enkantolo.
Ababhali bephepha elisha baqaphela ubuningi be-glyphosate, bethi "ukusetshenziswa okukhulu" kwaleli khemikhali "kuholele ekusakazekeni kwemvelo okubanzi," kufaka phakathi ukuvezwa okukhulayo okuxhumene nokusetshenziswa komuntu kombulali wokhula ngokudla.
Abaphenyi bathi yize abalawuli bethi amazinga ezinsalela ze-glyphosate atholakala kakhulu ekudleni aphansi ngokwanele ukuthi aphephe, "ngeke bakwazi ukubekeka engcupheni" yabantu abadla ukudla okune-chemical, ikakhulukazi okusanhlamvu nezinye izitshalo- ukudla okusekelwe, okuvame ukuba namazinga aphezulu kunobisi, inyama noma imikhiqizo yenhlanzi.
Imibhalo kahulumeni wase-US ikhombisa ukuthi izinsalela ze-glyphosate zitholakele ezinhlotsheni eziningi zokudla, kufaka phakathi uju oluphilayo, Futhi i-granola nabaqhekezi.
Abaphenyi bakahulumeni waseCanada nabo babike izinsalela ze-glyphosate ekudleni. Umbiko owodwa okhishwe ngo-2019 ososayensi abavela e-Agri-Food Laboratories yaseCanada e-Alberta Ministry of Agriculture and Forestry bathola i-glyphosate kuma-sampuli ayi-197 kwangu-200 oju abaluhlolayo.
Ngaphandle kokukhathazeka ngemithelela ye-glyphosate empilweni yomuntu, kufaka phakathi nokuchayeka ekudleni, abalawuli base-US bakuvikele ngokuqinile ukuphepha kwamakhemikhali. I- Isikhungo Sokuvikelwa Kwemvelo sigcina ukuthi ayitholakalanga "noma iziphi izingozi empilweni yomuntu ngenxa yokuchayeka ku-glyphosate. ”
izibulala-zinambuzane Bayer AG, umdlavuza, Ama-EDC, i-endocrine, Environmental Protection Agency, EPA, ukuzala, glyphosate, zezempilo, Monsanto, i-non-Hodgin lymphoma, Ukukhiqiza, ucwaningo, RoundUp, isayensi, izifundo